Siteenbar 19, 2017 2:20 b 0
Warbixintii 3aad ee la Xiriirta Xaalka Beeraha iyo Beeraleeyda Puntland
Beeraha Puntland oo sannado horreeyey ahaa kuwo wax soo saarkoodu uu kobcayo, suuqyada qudaartana saami weyn ka ahaa ayaa hadda la tilmaamayaa hoos u dhac lixaadleh in uu soo wajahay dhawrkii sano ee ugu dambeeyey.
Hoos u dhacaasi ayaa wax soo saarkii beeraha Puntland ee la dareemay sannadii ugu dambeeyey ayaa la tilmaamayaa in ay sabab u tahay arrimo dhawr ah oo is biirbiirsaday, ayna ugu horrayso xanuuno ku dhacay dalagyadii ay beeri jireen iyo xilliyo abaareed oo aad u adkaa oo la soo maray.
Arrinkaasi hoos u dhac iyo xaaladaha haysta beeraha iyo beeraleeyda ayaa Radio Daljir ka diyaarshay warbixinno xiriir ah oo aan uga xog-warramayno dhibka haysta iyo dhinacyada uu ka soo dugaashaday.
Warbixintaan oo ah middii 3aad waxaan ku eegaynaa xilligaan xaalka wax soo saar ee beeraha Puntland sida uu yahay, waxaana inoo diyaarshay, soona jeedinaya Xasan Heykal oo ku sugan istuudyaha Daljir ee Bossaso.
Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Alexis Sanchez waa Xaggee (dhegayso)